तेरो लागि रातो साडी पनि किनेको छु नी बुढि, हाम्रो पर्सी विहे हो, तँ कहाँ गइस् ?
१० माघ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका १ गुरुखोला घर भएकी रमिता पाँच दिन पछि हुने आफ्नो विवाहको तयारीमा आफै लागेकी थिइन् । डेढ वर्ष अघि आफ्ना प्रेमीसंगै बस्दै आएकी रमितालाई माइतीले उनको विवाह स्वीकार गरेका थिएनन् । तर अहिले माइतीलाई पनि मनाएर धुमधामका साथ माघ १३ गते विवाह गर्ने निधो भएको थियो ।
महेन्द्रनगरकै जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत उनी डेढ वर्षअघि गुरुखोलाकै प्रकाशबहादुर टेरसँग भागेर विवाह गरेकी थिइन् । टेरसँगै बसिरहेकी उनलाई अन्तरजातिय (बाहुन–क्षेत्री) सम्बन्ध भएकाले माइती पक्षले स्वीकार नगरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, तेरो लागि रातो साडी पनि किनेको छु नी बुढि हाम्रो पर्सी विहे हो ।
पाँच दिन पछि हुने आफ्नो विवाहका लागि साथीलाई कार्ड पुर्याउन हिडेकी उनलाई टिपरले ठ’क्कर दियो । उनी कहिल्यै नफर्कने गरी अस्ताइन् । महेन्द्रनगरकै मदन चोकमा भेट्ने भन्दै कार्ड बोकेर हिँडेको उनको घण्टापछि नन्दले फोन गर्दा लागेन । कार्ड बाँडेर साइकलमा फर्कंदै गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ भानु चोक नजिकै बिहीबार साँझ समान दिशाबाट आएको से१क ८८७ नम्बरको टिपरले ठक्क’र दिँदा उनको घ’टनास्थलमै निध’न भएको हो।
पाँच दिन पछि सिउँदोमा सिन्दुर भरेर आफ्नो घरमा औपचारीक रुपमा भित्र्याउने सपना बोकेका प्रकाशको सपना पनि भताभुगं भयो । प्रेमीकाको निध’नले वि’क्षिप्त बनेका प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमा निकै मार्मिक स्टाटस लेखेका छन् । उनले रमितासंग विताएका पलका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै अब आफु पनि छिट्टै आउने लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, तेरो लागि रातो साडी पनि किनेको छु नी बुढि हाम्रो पर्सी विहे हो ।
कहाँ छस् छिटो आइज न प्लीज । एक चिप्टी सिन्दुरको लागि तैंले आफ्ना आफन्त सबैलाई छोडेर मलाई साथ दिइस् म संग आइस् तर अहिले मलाई बिच बाटोमा छोडेर किन गइस् ? अब यति लामो जिवनको वाटो म एक्लै कसरी हिड्नु ? कति सपनाहरु थिए किन धोका दिइन् ?तँलाई मैले पहिले नै भनेको थिए तलाई केही हुनु पहिला नै म रहन्न भनेर ? मलाई एक्लै किन छोडेर गइस् ? म एक्लै के गरुँ ? छिटो आइज न विवाह गरुँ । मैले ल्याइदिएको यो साडीमा तेरो सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिने सपना छ मेरो । म पनि छिट्टै आउँछु तँ संग बुढी । मलाई नभुलेस् है मलाई पर्खेर बसेस् । म पनि छिट्टै आउँछु तँ संगै चखेवाको जोडी जस्तै थियो हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफै आउँछ ।
दिनपछि उनको विवाह हुँदै थियो। घरमा सामान जुटाउने र निम्तो बाँड्ने चटारो थियो। आफ्नो बिहेको निम्तो साथीहरुलाई दिन रमिता भट्ट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको जनज्योति टोल गएकी थिइन्। रमिताले साथीहरुलाई निम्तो बाँडिन्, तर विवाह हुन पाएन।निम्तो बाँडेर महेन्द्रनगर बजारतर्फ फर्किरहेकी उनको बिहीबार साँझ टिपरको ठक्क’रबाट नि’धन भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कञ्चनपुरबाट भवानी भट्टले लेखेकी छन्।
प्रकाशित मिति January 24, 2020
कमेडी च्याम्पियनबाट बाहिरिए ‘मेक्सम’
जब जन्मने बित्तिकै रुनुको सट्टा रिसाइन् उनी
मोडल ऋचा थापाको ‘महादेव अवतार’ (फोटोफिचर)
अनाथ बालबालिकाहरुसँग मनाए पलले जन्मदिन !
महराको डेटिङ, बाँस्कोटाको सेटिङ र पाैडेलको प्लटिङ
वायु प्रदूषणका कारण काठमाण्डाै उपत्यका बस्नका लागि अयोग्य !
फागुन १० गते शनिबारको राशीफलः यी ५ राशिको लागि अशुभ
‘बले’को आज जन्मदिनः टि्वनी गर्ल्सदेखि मुन्नीले दिए शुभकामना
संचारमन्त्रीको बचाउमा उत्रिइन् सांसद नवीना लामा
प्रचण्डकी नातिनीको नयाँ गीतमा कार्टुन क्रुको डान्स
बाँस्कोटासँगै काठमाडौं आएका गायक खरेलले भने- ‘कुल’ हुनुहुन्थ्यो, हाँसिरहनु भएको थियो
सुनकाे भाउ अहिलेसम्मकै महँगाे, राख्यो नयाँ रेकर्ड
काठमाडाैँमा फेसबुक लाइभ गर्दै आ’त्महत्या गर्न लागेका युवालाई प्रहरीले यसरी बचायो
महरा सरले न्याय पाउनुभयो, खुसी छु : रोशनी शाही
मुनाको ह’त्या अघि सीसीटीभीतिर फर्केर किन टो’लाएका थिए विजय ?
अस्ट्रेलियामा २० वर्षीया नेपाली युवतीमाथि छु’रा प्र’हार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वेबसाइटमा सयौँ पो’र्न भिडियो
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत वेबसाइटमा अश्ली’ल तस्वीर र भिडियो
लिभिङ टुगेदरमा रहेकी १९ बर्षिया युवतीले गरिन् आ’त्मह’त्या, युवक प’क्राउ
Mallaj Media Pvt Ltd
(It’s subsidiary of himalayadainik.com)
© 2018 - सर्वाधिकार सुरक्षित @ ehimalayadainik.com